Waldaaleen siviikii bulchiinsa gaarii mirkaneessuurratti shoorasaanii bahachuu qabu
Waldaaleen siviikii bulchiinsa gaarii mirkaneessuurratti shoorasaanii bahachuu qabu Featured
Biyya kamuu keessatti misoomni mootummaafi ummataan dalagamaa jiru galma gahuu kan danda'u yoo dargaggoonni ciminaan hirmaannaa taasisaniidha.
Hirmaannaan dargaggootaafi dubartootaa sadarkaa hundatti cimee deemnaan qaamoleen ummata bakka bu'anii raawwii hojii mootummaa to'achuu, hordofuufi deggaruu malan akka jajjabaatan karaa saaqa.
Keessumaa haalli qabatamaan biyya keenyaa wayita ilaalamu rakkooleen bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraatiin walqabatan baay'ee walxaxoo waan ta'aniif mootummaan qofaasaa furuu kan hindandeenye ta'uu hubatamuu qaba.
Rakkoolee kanneen furuu keessatti shoorri waldaalee hawaasaa olaanaa ta'uu mootummaan amanuun hojiileen ummataa bal'inaan akka hojjetaman gochaa tureera. Waldaaleen sivikii kanneen akka gurmuulee dubartootaa, ogummaa, dargaggootaafi kkf raawwachiistota hojii mootummaa to'achuufi hordofuu keessatti hanga barbaadame ta'uu baatus qoodasaanii bahachaa turaniiru.
Ta'us waldaaleen kunneen ergamaafi mul'ata qabatanii hundeeffamaniin rakkoolee hawaasaa furuuf tattaaffiin isaan taasisaa turan muraasa akka ture ragaaleen addaddaa nimul'isu.
Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Humna Namaa Oromiyaa, Doktar Biqilaa Hurrisaa tibbana waltajjii maree waldaaleen hawaasaafi qaamoleen mootummaa sosochii bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf Magaalaa Bishooftuutti taa'amerratti qindoominaan hojjechuurratti hanqinaaleen jiraachuu ibsaniiru.
Kunis waldaaleen hawaasaafi manni maree ummataa akka ijaafi gurra ummataatti hojjechuuf tattaaffiin hanga sadarkaa dakaatti taasisaa turan laafaa ta'uu mul'isa jedhu.
Akka ibsa oggantichaatti, sochiin qaamoleen kunniin tattaaffii mootummaan kenniinsa tajaajilaa fooyyessuufi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf taasisaa jiru utubuurratti hanqina olaanaa qabu. Kunis rakkoolee bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraa waliin walqabatan hundeedhaa maqsuurratti danqaa uumeera.
Hariiroon mootummaafi qaamolee kanneen gidduu jiru laafina waan qabuuf qindoominaan hojiirra oolmaa imaammatawwanii, sagantaaleefi paakeejiiwwanii, kenniinsa murtee, olaantummaa seeraa mirkaneessuufi kkf irratti waliin hojjechuun dhimma murteessaa ta'uu Doktar Biqilaan nihubachiisu.
Biiroonsaaniis foramiin waldaalee hawaasaa, manneen marii ummataafi raawwachiistota hojii mootummaa gidduutti dhiyeenyatti akka hundaa'u waliigalteerra gahuusaas nidubbatu. Kaayyoonsaa inni ijoonis Oromiyaatti haqummaafi iftoomina uumuun kenniinsi tajaajilaa sadarkaasaa eeggatee akka raawwatamu gochuun itti quufiinsa tajaajilamtootaa fiduudhaa jedhu.
Miseensotni waldaalee hawaasaafi manneen marii ummataa tokko tokko yaada kennaniin, haaromsi gadi fagoon taasifamaa jiruun rakkoolee bulchiinsa gaarii hanga sadarkaa gadiitti hiikuurratti qophaa'ummaan gama hoggantootaan jiru ammallee laafaa ta'uu eeru.
Deggarsi waldaalee hawaasaatiif taasifamu daran gadaanaa ta'uus eeranii, kallattiin mootummaan gaaffii dargaggootaa, bu'uuraalee misoomaa, hoggansa lafaa, bulchiinsa daldalaafi geejibaa, akkasumas hanqinoota sassaabbii galii wajjin walqabatan hatattamaan deebisuufi furuu dhabuun mootummaafi ummata kan walirraa fageesse ta'uus ni dubbatu.
Mootummaafi ummata walhubachiisuu keessatti gaheen miidiyaas olaanaa ta'uu miseensotni waldaalee kunneen eeranii, keessumaa gaafiileen ummata biraa yeroowwan adda addaatti ka'aa turan sirnaan deebii akka argataniif odeeffannoo sirriifi wayitawaa dabarsuun miidiyaaleen shoorasaanii hinbahanne jedhaniiru.
Daarektarri Olaanaan Dhaabbata Raadiyoofi Televizhinii Oromiyaa, Obbo Geetuu Wayyeessaa gamasaaniin, maddi odeeffannoo miidiyaalee qaama rawwachiistuu hojii hunda. Qaamoleen kunneen odeeffannoo qulqulluun akka ummataaf dhiyaatuuf gabaasa sobaarraa bilisa ta'uu qabu jechuun hubachiisu. Akka ibsa Obbo Geetuutti, kenniinsa odeeffannoorratti hanqinni olaanaan ni jira. Miidiyaaleenis odeeffannoo sirriifi sadarkaasaa eeggate sakatta'anii ummataaf dhiyeessuurratti rakkoo qabu.
Ta'us raawwachiistonni hojii odeeffannoo sirrii kennuuf dirqama qabaatanillee waldaaleen hawaasaa haalaan hordofuufi to'achuu akka qaban hubachiisaniiru. Kanas ta'e sana miidiyaaleen eenyuufillee firas ta'e diina miti jedhu.
Torban kana/This_Week 28784
Guyyaa mara/All_Days 1313295